Global Voices teny Malagasy » Kazakhstan: Toetry Ny Firenena · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Marsa 2018 7:27 GMT 1	 · Mpanoratra Adil Nurmakov Nandika Nancy
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Kazakhstan, Mediam-bahoaka, Politika, Toekarena sy Fandraharahàna
Tsy mandalo mihitsy eo ambany mason'ny mpitoraka bilaogy ny hetsika ara-politika goavana eo amin'ny firenena.Tamin'ity heriandro ity izao dia fotoana nandraisan'ny filoham-panjakana ao amin'ny firenena fitenenana. Tsy nahafaly  ireo mpitoraka bilaogy ilay fandrakofana momba ny fanentanana mahery vaika nataon'ny fantsom-pahitalavitra sy ny gazety rehetra eo ambany fifehezan'ny fanjakana.
Araka ny vazivazin'i  megakhuimyak “tsy ilain'ny filohantsika ny olona mpankasitraka mandrakariva – izany no antony hitenenantsika hoe “Tsia” rehefa hoy izy hoe “Tsia”. [ru]
Ny count-asylum, izay manadihady amin'ny antsipirihany ilay kabarin'ny filoha, no mahatsikaritra  ilay tsoratadidy – fitomboan'ny tsindry atao amin'ireo orinasa vahiny miasa amin'ny indostria mpitrandraka, ny fanavaozana ny rafitry ny hetra, fanamafisana ny fandraisan'ny fanjakana anjara sy ny fanarahan'ny governemanta maso ny sehatra ara-bola miaraka amin'ny fahaizana mandray ireo banky avy any ivelany.
“Nandresy isika !” hoy ny vakin'ny  fanambaràna nataon'ny Vovonan'ireo mpandraharaha Kazakhstan , izay tokotokony ho herinandro talohan'ny nivoahan'ny lahatenin'ny filoha niaraka tamin'ireo sosokevitra maromaro momba ny fanatsaràna ny raharaha ara-barotra – ary ao anatin'izany ny fanafoanana ny fanaraha-maso.
Fampandrosoana iray hafa mahaliana taorian'ny lahatenin'ny filoha ny momba ny antsony hitsitsiana fatratra ny harena sy ny vola. Nasongadin'ny vavahadin-tserasera Neweurasia ny lahatsoratra iray  momba ny fifandraisan'ity antso ity amin'ilay fankalazana ny tsingerintaona fahafolon'ny Astana ho avy eo. Nafindran'ny filoha Nazarbayev avy any Almaty ho any Astana ny renivohitr'i Kazakhstan 10 taona lasa izay. Avy eo novàna hifanaraka amin'ny tsingerintaona nahaterahan'ny filoha ny andron'ny Astana.
Naharitra am-bolana maro ilay lanonana ary nahitàna kaonseritry ny kintan'ny pop maneran-tany, ny fampisehoana ny sambokelin'i Venise sy ny fandihin'i Vienne ets, ets….. Andro vitsivitsy taorian'ilay famoahana lahatsoratra, nobaikon'ny filoha Nazarbayev ny governemanta hanatsotra kokoa ilay fety, hoy ny tatitra  nataon'i Adam Kesher.
Mandritra izany fotoana izany, tsy ny olona rehetra no mandinika politika amin'ny heviny ôfisialy. Mieritreritra  i Nemtschin hoe mba inona/iza izy raha tsy rava ny Firaisana Sovietika.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/28/116425/
 Tsy nahafaly: http://community.livejournal.com/journalistkz/124663.html
 Vovonan'ireo mpandraharaha Kazakhstan: https://mg.globalvoices.orgwww.businessforum.kz
 lahatsoratra iray: http://kazakhstan.neweurasia.net/2008/02/11/viva-astana/